Ukubhala ngesiporho-Uyifumana njani iqabane elifanelekileyo lokubhala leepapernerds
Into omele uyazi!
Siyavuya ukukunceda ngamazwi nangezenzo!
Zemfundo Ukubhala ngesiporho
Ingcinga ye Ukubhala ngesiporho iphuhlise igama elaziwa ngumntu wonke, ngakumbi kule minyaka idlulileyo.
Kodwa kuthetha ntoni kanye ukubhala ghost?
Ngokusisiseko, yiyo loo nto Ukusetyenziswa kwenkonzo ngumthengi ngenjongo yomsebenzi obhaliweyo obhaliweyo ngokweenkcukacha zakhe kunye neminqweno yakhe. Ngokuqinisekileyo oku kubandakanya umsebenzi wokufunda onje Bachelor-, okanye ithisisi yenkosi, Kodwa inokuchazwa ngokubanzi kakhulu: Iincwadi, amanqaku, izicatshulwa kunye nezinye iifom ezibhaliweyo nazo zimele indawo yomsebenzi wesiporho.
Kwanezicelo, inkcazo kunye neengxelo zinokuba yinxalenye yemimandla yezifundo ghostwrit ezingqongileyo.
Yiyo kanye le nto sisoloko sifumana imisebenzi yokubhala ghost iyindwendwe. Nangona kunjalo, aba bantu abamele nto ngaphandle kwababhali abakhululekileyo.
Kodwa yintoni kanye kanye ekufuneka uyazi malunga nokubhala ghost?
Fika apha ...
... yonke imibuzo ngokukhangela!
Ithetha ntoni (imfundo) yokubhala ghost?
Kwaye kutheni kukho into enjalo konke konke?
Ukubhalwa kwesiporho ngokubanzi:
Ukubhala isicatshulwa secandelo lesithathu ngokuxhomekeke kukuthatha kwakho
... ngaloo ndlela yenza lula umsebenzi womoya.
Ngokusisiseko unako Umbhali-moya inokusetyenziswa phantse kuzo zonke iindawo.
Nokuba zizicelo, iintetho, iibhlog, iincwadi okanye iintetho, okanye kwicandelo lezemfundo kunye nesayensi, njengendlu, i-bachelor, inkosi, i-theses kunye ne-dilpom theses.
Olu phando "lweziporho", lubhale phantsi kwaye luchaneke umsebenzi wokubhaliweyo endaweni yomthengi kwaye lubenze lufumaneke kwiqela lesithathu. Kuxhomekeke kwinkcazo kunye nokufumaneka kweetemplate kunye namaxwebhu afunekayo, isicatshulwa sibhaliwe siyinyani kumxholo kangangoko kunokwenzeka.
Ukubhalwa kwesiporho kwezemfundo nako ...
... kufuneka ahlangabezane neemfuno ezininzi ukuze athathwe njengoneleyo ngokwenqanaba!
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zesidanga semfundo, iitekisi ezisemthethweni, ezentlalo kunye nezenzululwazi kufuneka zine imfuno unokungqina ilensi ibhalwe kwaye ngaphezulu kwako konke kodwa Ukuthembeka unokungqina.
Kuyenzeka ukuba ababhali basePapernerds bahlala bezifundo ezifanelekileyo abanokubonisa amava awaneleyo kwiindawo zabo zezifundo kwaye bazi malunga nokusetyenziswa ngokuchanekileyo kwezixhobo zemfundo.
Ngokuqesha abasebenzi abaziingcali, sinokuthembisa olona mgangatho ubalaseleyo kunye nengqiqo!
Ukubhalwa kwesiporho akukho semthethweni, akunjalo?
Hayi, ukubhala ghost bekusoloko kwaye kuya kuhlala kusemthethweni.
Kuba ngokusisiseko ukuqesha umntu obhala ngokulinganayo usebenzisa inkonzo!
Inkululeko yesivumelwano ngaphandle kokunyhashwa kwamalungelo abantu besithathu isebenza kule ndawo ngokuchanekileyo nakwezinye.
Nokuba umbhali ubiziwe okanye akunjalo, kuxhomekeke kwizivumelwano zesivumelwano.
Le yayikwenye Isigwebo seNkundla yeNqila ePhakamileyo yaseFrankfurt (01.09.2009-Ref.: 11 U 51/08) iqinisekisiwe.
Ukusetyenziswa kwababhali besiporho kulinywa kwiindawo ezininzi kwezi ntsuku kwaye ngenxa yoko khange kudelelwe ixesha elide.
Nokuba kukwimithombo yeendaba, ezopolitiko, isayensi okanye ezizimeleyo: ukucela amaxwebhu abhaliweyo kungakubuyisela ixesha obungenakuba nalo.
Ukubhala iitemplate ze Umsebenzi wendlu, Iingongoma, Iithisisi eziyintloko, Iithisisi zesidanga kwaye ezinye iithisisi azichaseki ngokwembono yezomthetho.
Achtung! Ukubhalwa kwezi theses akuphikisi ngokwembono yezomthetho, kwahlukile ngokungeniswa kwetemplate njengoviwo olwahlukileyo!
× Lahla isilumkiso
Zithini izikhokelo zomthetho?
Kuxhomekeka kakhulu kubo Ukusetyenziswa kwesicatshulwa ngo!
Ababhali be-Ghostwriters abasebenzi kuphela ngendlela yokuxhasa abafundi, kodwa nakwiinkampani ezininzi kunye nababhali abathi, ngokulula, bafuna uncedo ngokubhala kuba akukho xesha laneleyo okanye kuba bathembele kuwe Upelo lungenazimpazamo Ndifuna ukukwazi ukuhamba.
Kwaye yile nto kanye eyenzelwe ababhali bomoya.
Izinto ezenziwa ngabaxhasi ngemveliso yokugqibela azisekho ezandleni zababhali bomoya.
Umzekelo, umahluko owaziwayo wokungenisa umsebenzi womnye umntu awuzukuvunyelwa njengowakho, njengokukopa esikolweni, akunjalo?
Nangona kunjalo, akuvumelekanga kuwe Uncedo malunga nokucinga kwaye ufumane ukulungiswa ..
Njengoko ubona, ukubhala ghost akufuneki kujongwe njengokubi kwaphela!
Kuqala nini ukubhala ghost?
Ukubhalwa kwesiporho akuyiyo into eyenzekileyo. Kwabaninzi imele ibenye Ukukhululeka komsebenzi ayonto idelekileyo leyo.
Khawufane ucinge ukuba ubhale incwadi kwaye ngoku ufuna ukuyilungiselela ukuthengisa. Ngelishwa, akukho namnye kubahlobo bakho onalo ixesha elininzi lokuhamba ngencwadi enephepha le-1500, igama negama, kunye nokunye Ukulungisa ingxaki ukuhamba. Kwelinye icala, ubhale le ncwadi ngokwakho kwaye ubona okuninzi kuyo Iimpazamo zopelo nopelo hayi ngaphezulu. Ke ukusilele okunokuthi ufumane ngokwakho kuphela emva kwexesha elide kunye nomsebenzi omninzi.
Kwaye yile nto kanye eyenzelwe iipapernerds!
Kule meko, abasebenzi bethu abanolwazi baya kukuvuyela ukufunda incwadi yakho ukulungiswa kwaye yajonga Isigameko sokukopela.
Kodwa nakwindawo ye uqeqesho kwezemfundo nakwisayensi Ukubhala ghost kunokunceda.
Khawufane ucinge apha ukuba isidanga sakho sonke sixhomekeke kumsebenzi omnye. Ngelishwa, khange ubenaye omnye kuwo wonke umsebenzi wakho isicatshulwa semfundo Kubhaliwe, kuya kufuneka uyokusebenza kunye neyunivesithi ukuxhasa ngemali izifundo zakho kwaye ke ngekhe uthathe iinyanga ezimbini okanye, awusenalo ixesha.
Apha, nathi, siyafumaneka ukucebisa kunye nokunceda ngo-Tukuveliswa kwesindululo, ukwenziwaI ukucaphula ngokuchanekileyo kwaye izilungiso Kubandakanya. Ukutshutshiswa.
Oku akunakuphikiswa, njengoko isiphelo semveliso sivela kuwe ngaphandle kwayo yonke into!
Silapho kuphela ngenxa yakho ukunceda!
Ngaba likho iqela ekujoliswe kulo lababhali bomoya?
Njengazo zonke iindawo kukho ezibizwa njalo Amaqela ekugxilwe kuwoabasebenzisa uninzi lweenkonzo zethu. Zinokubakho izizathu ezininzi zoku: ixesha elincinci kakhulu okanye indlela yobugcisa yenza kube nzima ukubetha ixesha elimiselweyo, okanye ubuze imibuzo ukwenziwa kwesitayile kwaye Izitayile zokucaphula zibambe.
Ekugqibeleni, isigqibo kufuneka senziwe kuqala: Ewe, abo banikiweyo kufuneka bathathelwe ingqalelo Iimfuno, quality und natürlich ulawulo.
Ipotifoliyo yomthengi ke iyaqhubeka kwiinkampani ezinikezela nge ubukho bophawu olulungileyo jolisa ngaphezulu Iiarhente zokubonisanaabakhethe uncedo ngo ukwenziwa kobungcali brauchen, AbasemagunyeniBanoncedo ekuhleleni ezintsha Iifom fikelela kwi Abantu babucala, njengabafundi abafumana I-Bachelor okanye i-master thesis kufuneka angenise.
Ngokusisiseko, iqela lethu ekujoliswe kulo lifikelela kuwo wonke umntu Iindawo ezijolise ekusebenzeni ebomini lowo ukuqulunqwa okungqalileyo kunye nolwazi olunokwenzeka imfuno. Kwaye yile nto kanye silapha!
Zeziphi iindleko endinokuzilindela xa ndiqesha ababhali bomoya?
Ngamafutshane, kunokuthiwa apha: Inzame engakumbi, isiphumo sokugqibela siya kubiza.
Kuba le ngu wena kunye nemveliso yexesha elinye kwimveliso, ixabiso liyinyaniso elisekwe kumzamo.
Oku kulandelayo kukuthatha isigqibo kuthi:
Ububanzi + ngesihloko + isifiso + sexesha
Ukongeza, amaxabiso ekhosi axhomekeke nakwisiphi isidanga ekufanele ukuba usiphumeze.
Kuyenzeka ukuba a inkcazo ye-bachelor ithisisi ngamaphepha angama-30 atshiphu kakhulu kunenye Ithisisi yenkosi yokuhlola ngamaphepha angama-60-90. Kuxhomekeke ekusetyenzisweni kwabasebenzi, kukho iyantlukwano ezihamba kunye nemiba yezifundo.
Ke uyabona ukuba ukwenza ireyithi ethe tyaba akunakuba sengqiqweni kwezi meko.
Siyavuya ukukuvumela ungene umnikelo ongabopheleliyo kuba ababhali besiporho ababizi kangako njengoko uhlala ucinga!
Ngaba isabelo sam ngenene siyimfihlo?
ukuqonda ecaleni kwe quality yethu eyona nto iphambili!
Yiyo loo nto wonke umsebenzi, nokuba umncinci kangakanani, uwufumana abasebenzi abanolwazi yenziwe yafumaneka.
Ukusuka ekubhaleni ukuya ekunikezeleni, unokunxibelelana nombhali wakho wesiporho nangaliphi na ixesha kwaye unokuba nesazela esicocekileyo Jonga imeko isicelo.
Ke ujikeleze a ubulumko obugqibeleleyo Ukuqinisekisa ukuba uhlala unefayile ye- umntu oqhagamshelana naye ngqo Njengomphathi wakho kunye nombhali.
Inkcukacha ezithe vetshe!
Ngaba sikhona isiqinisekiso sokwaneliseka?
Um Eyona nto ibalaseleyo Ukuqinisekisa thina kwiPapernerds.de sithathe amanyathelo okuphumeza izimvo zakho kangangoko kunokwenzeka:
1. Sebenza kuphela kwiipapernerds Abasebenzi abaqeqeshiweyo, okt ngokweenkcukacha zemfundo, abafundi abagqirha, abahlohli, izazinzulu kunye nabaphandi.
2. Bonke abasebenzi bethu banako oku kubo izakhono zokubhala nezokuhlalutyaukuze ukwazi ukuphumeza iminqweno yakho ngokufanelekileyo. Umzekelo, kuya kufuneka usikholwe ngesampulu yombhalo xa ujoyina inkampani yethu!
3. Siyakha unxibelelwano olusisigxina nomthengi wethu! Ngamanye amagama, umsebenzi uya kuveliswa ngokuchanekileyo ngokweenkcukacha zakho kwaye uya kujongwa kwaye uxoxwe kaninzi! Ukusuka kulwandlalo okanye libeke, malunga nolwakhiwo lwezahluko, izihloko / iithiyori, iindlela ngokubhekisele kwisimbo kunye nesimbo sokubhala, yonke into ixoxwa nzulu!
4. Ukuba kukho into engakulungelanga: unayo nathi iqabaneungatsho kananjalo ukuba awanelisekanga.
Singenza kuphela uphuculo ukuba usixelela ukuba yintoni ekukhathazayo. Kwaye yile nto kanye esiyifunayo!
Ukuba awonelisekanga kwaphela sisicatshulwa sakho ekugqibeleni, sinokubonelela ngolwazi oluthe kratya apha Uhlaziyo thetha.
Nxibelelana nje nomphathi wakho!
Ngaba ukunyanzelisa ukukopela kunyanzelekile kumbhali wesiporho?
KwiPapernerds.de uyakufumana umsebenzi wakho ukukhangela mahala ukukopa ukuya.
Sifuna ukukukhulula emsebenzini kunye nawe Eyona nto ibalaseleyo Hambisa, yiyo loo nto kubalulekile ukuba wazi ukuba umsebenzi wakho uyayithobela na imigaqo esebenzayo ngokubanzi!
Ke ukuze siphephe ukukopa, sinenqanaba eliphezulu lobuchwephesha abasebenzi abanobuchuleNgubani owazi kakuhle into evunyelweyo nengavumelekanga.
Ukuze sikunike ukhuseleko olongezelelekileyo, siya kukunika uvavanyo usebenzisa ezona zibalaseleyo Isoftware yokukhohlisa ukuya.
Ukuba usenayo inkxalabo, ungaqhagamshelana nathi nangaliphi na ixesha!
Ewe kunjalo, unokukhetha ukusebenzisa iinkqubo simahla qalisa ukukhangela kwakho kwi-Intanethi.
Ngubani endinokuqhakamshelana naye ukubhala ghost?
umqolomba umntu oqhagamshelana naye ekunene Ukuyifumana akusoloko kulula.
I-intanethi inyuse uluhlu lweenkonzo zokubhala ghost.
Kodwa kufuneka ndenze njani isigqibo kwaye sisiphi isisombululo esifanelekileyo kum?
Nalu ushwankathelo olufutshane lwento ekhoyo:
Umbhali ghost freelance
Ukhangela umntu ngesihloko esinye esikhethekileyo?
Emva koko unokuphumelela kolu khetho.
Abasebenzi abazimeleyo abaziporho Abathengi bakho bazikhangela kwaye basebenzise isihloko esinye kuphela, oko kukuthi leyo baqhelene nayo. Igqitywe tu!
Amaqonga / uluntu lweenkonzo zokubhala ghost
Phantse njenge-eBay classifieds: ekuthiwa-njalo Iqonga lokubhala ngesiporho Abaxhasi banokubeka iinkonzo ezinqwenelekayo kwaye bafumane izibonelelo. Ewe amaxabiso ahluka kakhulu apha, njengoko ufumana iintlobo ngeentlobo zezibonelelo ezivela kumaqela ahlukeneyo. Nangona kunjalo, oku kuyanzima ukuthelekisa umgangatho, kuba uphando likuwe wedwa. Ayizizo zonke izithembiso ezihambisa oko zikuthembisayo.
Iiarhente zokubhala ngesiporho-iinkonzo zokubhala
Die Isisombululo esipheleleyo umthengi wokugqibela: unephepha phantse zonke iinkalo zezifundo kunye nokukhetha esele kukhethiwe kobuchwephesha Ababhali besiporho abanobuchule kunye namava eminyaka. Unomntu onxibelelana naye ngqo kuwo onke amatyala kwaye unokuxhomekeka Iitekisi ezibhala ngaphandle kokukhutshwa ndijonge phambili. Ukongeza, ugqiba ikhontrakthi esemthethweni nenkampani ebhalisiweyo kwaye ngaloo ndlela ufumana ukhuseleko lomthetho.
Kukho iigusha ezimnyama apha nazo, kodwa ungazisusa neengcebiso kunye namacebo ambalwa.
Yeyiphi imodeli oyikhethileyo ekugqibeleni iya kuwe.
Nangona kunjalo, ukuba unomdla wokwenza umsebenzi wakho yiarhente yenkonzo efana nePapernerds.de, emva koko Qhagamshelana nathi ngovuyo ngolwazi oluthe kratya!
Ndisifumana njani isibhali-ghost esifanelekileyo?
Ngelishwa kunjalo Ishishini lokubhala ngomphefumlo ungagcwaliswanga zizimvo eziphosakeleyo ngelize.
Njengakwezinye iindawo ezininzi, i-Intanethi ikwanika abakhohlisi ithuba lokufika kubathengi ngokukhawuleza nangokulula.
Yiyo kanye le nto kubalulekile ukuba Ukujongana neearhente zokubhala ghost Ukujonga ngokuthe ngqo ukuba zeziphi na izingqinisiso abanokubonelela ngazo kunye nokuba nzulu kangakanani ngesithembiso sabo.
Okwakho, ngokufutshane, iinyani ezaziwa kakhulu:
Imbali yenkampani ijongeka kanjani?
Kude kube nini iarhente oyikhethileyo ikwiimarike kwaye ngaba bukhona ubungqina obusekwe kakuhle (uphononongo, amanqaku aneetampamp,
Ngokwesiqhelo, abakhohlisi abahlali kwi-intanethi ixesha elide.
Isekwe phi iarhente?
Ngaba iarhente yakho isekwe eJamani, eSwitzerland okanye e-Austria?
Qiniseka ukuba usebenzisa iidilesi zokwenyani kunye neenombolo zefowuni xa usenza ukhetho lwakho.
Ukuba awufikeleli buqu ngexesha lophando lwe-arhente, kunokwenzeka ukuba ubalekele kwinkampani yobuqhetseba yelinye ilizwe.
Amaxabiso angaphantsi kwezinga eliqhelekileyo lexabiso kufuneka abe luphawu lokuba awudlali ngamakhadi anyanisekileyo apha.
I-theses zolu hlobo zinokubhalwa ngabaphefumli abangafanelekanga kangako, okanye awufumani nkonzo kwaphela.
Ixabiso njengexabiso lomgangatho linokusetyenziswa njengomgaqo wesigqibo.
Fumana izibonelelo ezininzi nokuba kunjalo emva koko uthathe ezona zilungele wena kwaye yintoni ebonakala ikhuselekile, kuba ungathembisa kakhulu, kodwa ungazisi.
Ithini ingcamango ngokubanzi?
Libonakala njani ixabiso?
Unaso isishwankathelo seenkonzo ezibonelelweyo, kubandakanya isitampu sexesha?
Ngaba ulifumene uqikelelo olusengqiqweni ekuqaleni?
Unikezela njani usebenza kwaye unalo ithuba lokucela izilungiso okanye ukujonga inkqubela phambili?
Okanye ngaba ufumene ireyithi ethe tyaba ngaphandle kokonakala?
Zeziphi iinkonzo ezinikezelwa yiarhente?
Jonga ipotifoliyo yenkonzo yeearhente ezizodwa kwiinkalo zeengcali kunye nohlobo lomsebenzi okanye ukubhala. Ukuba awufumani nasiphi na isalathiso sabasebenzi abanobuchule abasuka kwiindawo ezahlukeneyo, akufuneki ubeke ii-odolo apha.
Zibhengezwa njani iinkonzo?
I-arhente isebenza njani kuthungelwano lwentlalo, iintengiso okanye ukukhutshwa kweendaba okanye kumaphepha ahambelana noko?
Ngaba ungawubuyisa umda wexesha?
Ngaphandle koko, kusebenza okufanayo apha: Ukuba unokufumana kuphela ungeno olunye lwearhente, emva koko ufumene umboneleli othandabuzekayo apha.
Kutheni le nto isicatshulwa esivela kumbhali wesiporho sibhetele kunesakho?
Lo mbuzo uphendulwe ngokukhawuleza.
Ukuba awudingi ncedo kwaye uqinisekile ngesizathu sakho, unexesha elaneleyo, okanye ukonwabele nokubhala amaphepha ezifundo, awuyi kujonga umbhali wesiporho.
Nangona kunjalo, a Ukulungiswa kwesibini kokulungiswa kwe-bug kunye nokuphuculwa ukukhokhela.
Ngokomgaqo, ababhali besiporho banokunceda ngokuchanekileyo abo bantu bangazalelwanga olu hlobo lomsebenzi okanye abaphelelwa lithemba ngalo. Ukongeza kukho enye Ixesha kunye nomgangatho wobomi kwakhona, kuba uxinzelelo lwemihla ngemihla kunye noloyiko lokungaphumeleli nako kunokushenxisa imiba emibi.
Ngaba ufuna uqeqesho oluthile lomsebenzi wobuchwephesha njengombhali wesiporho?
Ukubhalwa kwesiporho kusasebenza akukho msebenziNgelishwa oko kuthetha ukuba ngokusemthethweni wonke umntu angazibiza ngokuba sisiporho.
Kungenxa yoko le nto kunokwenzeka ukuba Amatyala obuqhetseba phezulu kakhulu kule ndawo.
Kodwa wenza ntoni ukuba ufuna uncedo ngokwenene kwaye ungathanda ukulusebenzisa?
Yenza uxanduva lwakho lokwazisa!
Ixabiso eliphantsi alisoloko lilungile, yiyo loo nto eyona nto iphambili yokukhangela ingeloxabiso, kodwa i Amava Yombhali wakho.
UGehen Sie iziqinisekiso kwaye musa ukuvumela ixabiso lithathe isigqibo kwangoko.
Ekugqibeleni, iimfuno zakho zomsebenzi zithatha isigqibo, ekufuneka nazo zibonise intsebenzo.
Ndinganceda njani ukwenza umsebenzi wam?
Ngokusisiseko, ulwazi oluthe kratya onokuthi usithumele lona, ​​kokukhona siya kuwenza ngokwakho umsebenzi wakho.
Izimvo zethu, iingcebiso, uphando, kunye neengcebiso zenza umsebenzi wethu ube lula kwaye sinako amaxesha otshintsho akhawulezileyo ukukhokhela.
Okukhona unikela njengomntu, kokukhona umsebenzi wakho unokuba nesitayile.
Ewe ihlala iluncedo ukuba unxibelelana nathi qhagamshelana ngexesha. Nangona kunokwenzeka ukuba ubhale iphepha ngexesha elincinci ukuba lifuneka, uyasokola quality ngaphantsi. Ukubhala yenye yeenkqubo zokuyila ezinokukhula kwaye zikhule ngokuhamba kwexesha kunye nonxibelelwano nomthengi. Ukuba olu khetho alufumaneki, oku kunjalo nakwindlela yokubhala.
Ke ngoko: Ixesha elininzi kunye nolwazi onokusinika lona, ​​ngcono!
Lilonke: ziziphi izibonelelo zam kunye nezinto ezingalunganga?
Kungenxa yesiphi isizathu sokuba ufune uncedo kumbhali-wesiporho awunamsebenzi, kuba Siphatha wonke umthengi ngokulinganayo iba. Asikusoli okanye izinto ezinje ngokuba nesibindi sokufuna uncedo. Ngaphandle kwalonto, unokuxhamla nakwiiarhente zokubhala ghost, njengezinga eliphezulu le- Umgangatho nobungcali ngokuqinisekileyo unokufunyanwa kumelo lomsebenzi wakho.
Abo baqhuba kakuhle baya kuvuzwa ngako!
Amava amaninzi anokuziswa ngabasebenzi bethu etafileni anokukunceda ukuba uphucule ukuxhaphaza amandla apheleleyo.
Nokuba unentsilelo encinci ekusebenziseni ulwimi lokufunda. Ababhali bethu besiporho banokusebenza kunye nawe ekuphumezeni izimvo ngendlela ejolise kuyo kunye nesitayile engenasiphako kwaye bahlengahlengise yonke intsebenziswano kwiimfuno zakho.
Ukungancedi kunokuba kukusebenza iiarhente ezithandabuzekayo okanye abantu zivela xa ulindelo lungafezekiswa ngexesha okanye ngokungonelanga. Kule meko, ingcebiso elungileyo inokubiza kakhulu.
Masikuncede ukuyithintela ukuba ingenzeki:
Siza kukunceda ukhethe ifayile iqabane elifanelekileyo lokubhala kwaye ubeke eyakho Iminqweno isenzo.
Unathi ufumana ngqo ngqo Umboneleli wakho wesevisi kwaye unako impembelelo esebenzayo thatha inkqubo yokubhala yomsebenzi wakho. Ngokugqwesileyo Ulawulo lwexesha singakwazi ukuqhubeka Guqula izicelo ngokupheleleyo, ukuba uza kuthi ngexesha! Sisonke singasebenzisana nawe kuphando nakwizidrafti kwaye senze isicatshulwa esenzelwe wena.
Ekugqibeleni, umsebenzi olungileyo unexabiso kwaye uthetha ngokuxabisa kwakho umsebenzi wababhali besiporho!
Ukuba siyikhuphile inzala yakho, nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi:
Silindele ukubuza kwakho!